ပေါက်ခေါင်းကကိုဗစ်၁၉ လူနာနဲ့ထိတွေ့သူ လေးဆယ်ကျော်ကို အသွားအလာ ကန့်သတ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ တစ်သန်းကျော်ပြီ၊ဂျပန်ရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ မြန်မာတစ်ဦးရဲ့အတွေ့အကြုံစတဲ့ဧပြီ ၃ရက်ထိပ်တန်းသတင်းများ
ပေါက်ခေါင်းကကိုဗစ်၁၉ လူနာနဲ့ထိတွေ့သူ လေးဆယ်ကျော်ကိ...
3 เม.ย. 2563 - 09:42 น.
(၁) ပေါက်ခေါင်းက ကိုဗစ်၁၉ လူနာနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့သူ လေးဆယ်ကျော်ကို သီးသန့်ခွဲခြားစောင့်ကြည့်
"မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးက ပေါ့စစ်တစ်လူနာလို့ သိရတည်းက ကျွန်တော်က Home quarantine (နေအိမ်မှာ သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင် ခြင်း) လုပ်နေလိုက်ပါတယ်။ အပြင်လည်းမထွက်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကြိုတင်တော့ မှန်းထားမိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးတော့ မျှော်လင့်ထားတာပေါ့။ အဆိုးဆုံးကို ရင်ဆိုင်ဖို့လည်း ပြင်ထားပါတယ်။ အခု ညက ဆေးစစ်ချက်ထပ်ထွက်တော့ Facility quaratine (အစိုးရက စီစဉ်ပေးတဲ့ သီးသန့်စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာ) ကို ဒီမနက် ရောက်ပါတယ်။ အထက ကျောင်းနဲ့ ပုဗ္ဗာရုံဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း နှစ်နေရာခွဲထားပေးပါတယ်" လို့ ဦးသက်မင်းဇော်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပထမဆုံးတွေ့
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်လာနိုင်သလား
(၂) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူပေါင်းတစ်သန်းကျော်သွားပြီ
တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ကပ်ရောဂါကို ခုခံနေကြရ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူပေါင်း တစ်သန်းကျော်သွားပြီလို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ သုတေသနက ဆိုပါတယ်။
လူပေါင်း ၅၃,၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး လူ ၂၁၀,၀၀၀ ကျော် ပြန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေထဲ ကူးစက်ခံရသူအများဆုံးနဲ့ အီတလီက သေဆုံးနှုန်းအများဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီ ကိုဗစ်၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်း ဝူဟန်ကနေ စဖြစ်ခဲ့တာ အခုဆို သုံးလကျော်သွားခဲ့ပါပြီ။
ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သေဆုံးမှုနှုန်းပြ ဂရပ်ဖ်
ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ အဆိုအရ လူတစ်သန်းကျော်ကူးစက်ခံရတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီထက်အရေအတွက် ပိုများနိုင်ပါတယ်။
ပထမတစ်ကြိမ် ကူးစက်ခံရမှု တစ်သိန်းပြည့်ဖို့ကို တစ်လခွဲပဲ ကြာခဲ့တဲ့အတွက်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်းမှာ နှစ်ဆတိုးနှုန်းနဲ့ ခုလို လူတစ်သန်း ကျော်ထိ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ရောဂါဖြစ်ပွားသူရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဖြစ်ပြီး ဒါက ဥရောပမှာဖြစ်ပွားသူရဲ့ တစ်ဝက်ခန့်ရှိပါတယ်။
စပိန်မှာ တစ်ရက်တည်းနဲ့ လူ ၉၅၀ သေဆုံးခဲ့ပြီး ဒါဟာ ၂၄ နာရီအတွင်း လူသေဆုံးမှုအများဆုံး နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
စပိန်မှာ ကူးစက်ခံရသူ ၁၀၂၁၃၆ ဦးရှိခဲ့ပြီး အရင်ရက်တွေကထက် ကူးစက်မှုနှုန်း ၈ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေကတော့အခုအခါ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနှုန်းအထွဋ်အထိပ်ကိုရောက်နေပြီး လာမယ့်ရက်တွေအတွင်း ပြန်လည်ကျဆင်းသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
စပိန်ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့သေဆုံးသူ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး အလုပ်လက်မဲ့ပေါင်း ကိုးသိန်းလောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်မှာတော့ အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့် စာရင်းသွင်းသူ ၆ ဒသမ ၆ သန်းကျော်ရှိလာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
(၃) ဂျပန်ရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ မြန်မာတစ်ဦးရဲ့အတွေ့အကြုံ
ဂျပန်မှာ ဒီသတင်းပတ်တွေအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက် လာမယ့်သတင်းပတ်ကုန်ရက်တွေမှာ လူတွေတက်နိုင်သလောက်အပြင်မထွက်ဘဲ နေကြဖို့ အစိုးရက သတိပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိုင်တီနယ်ပယ်က ကုမ္ပဏီတွေကလွဲလို့ အလုပ်တွေရုံးတွေအများစုကတော့ ပုံမှန်တက်နေရဆဲဖြစ်ပြီး ကူးစက်နှုန်းတိုးလာတဲ့အပေါ် စိုးရိမ်တယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ မသီတာဦးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
"ဒီတစ်ပတ်ကိုပဲ နေ့စဉ် ကူးစက်သူက တိုးလာနေတာ။ ဒါ တိုကျိုတစ်ခုတည်းပေါ့။ တခြားမြို့နယ်တွေမပါသေး။ ကျွန်မတို့လည်း ပုံမှန်ရုံးတက်နေရတုန်းပဲ။ ကျွန်မက ရုံးကိုပြောတယ်။ နေ့စဉ် ငါကြောက်နေရတယ်။ ရထားပေါ်လဲလူကအပြည့် လို့ ရုံးတက်ရမယ်ဆိုတစ်ခုခုလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားရှိတဲ့သူက ကားနဲ့လာ၊ မရှိတဲ့သူကို အကြိုအပို့ လုပ်ပေးတယ်။ ကားရပ်၊ လမ်းဖြတ်ခ စရိတ်ဘာညာကတော့ ရုံးကပေးပေါ့။ လာလောဆယ်က တော့ နိုင်ငံခြားတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရတဲ့အပိုင်းမှာလုပ်ရတယ်။ ကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့ တခြားတိုင်းပြည်တွေကတော်တော်များများ lock down လုပ်နေတယ် "လို့ မသီတာဦးက ရှင်းပြပါတယ်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကတော့ လူတွေ သူတို့အပြုအမူကို မပြောင်းလဲရင်တော့ တိုကျိုမှာ ကူးစက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဂျပန်ပြည်သူတွေ အနေအထိုင် မဆင်ခြင်ရင်၊ ရောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့ နေရာတွေ၊ ပွဲလမ်းသဘင်တွေမရှောင်နိုင်ရင် အခြေအနေဆိုးတွေနဲ့ ကြုံရနိုင်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်မှာ လောလောဆယ် ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပွဲတချို့ကို မလုပ်ဖို့ ကန်ဆယ်လုပ်ထားပေမယ့် တချို့ပွဲတွေကတော့ လုပ်နေကြတုန်းလို့လည်း မသီတာဦးက ဆိုပါတယ်။
"ဒီတနင်္လာနေ့တုန်းက မြို့တော်ဝန်က ပြောတယ်။ ကူးစက်မှူဟာ စားသောက်ဆိုင်တို့ ကလပ်တို့ဘားတို့က များလို့ ဒီလိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမသွားကြပါနဲ့ပြောတာကို တချို့ စိတ်ဆိုးတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်။ ကျွန်မက ရုံးမှာ ကြောက်တယ်ဆိုတော့ နင်က ဘာကြောက်တာလဲငါတို့တော့မကြောက်ဘူးတဲ့" လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဂျပန်မှာ ကံကောင်းတာတစ်ခုက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်ပျံ့ပွားမှုမရှိသေးခင် နွေဦးရာသီအစဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုအချိန် ဂျပန်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဝတ်မှုန်အလာဂျီဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဂျပန်နေသူအတော်များများ နှာခေါင်းစည်းတွေတပ်ကြတာကြောင့် ကူးစက်မှုနှုန်းနည်းနေသေးတယ်လို့ ယုံကြည်ရကြောင်း ဂျပန်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာနေထိုင်နေတဲ့ မသီတာဦးက ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ပေါက်ခေါင်းကကိုဗစ်၁၉ လူနာနဲ့ထိတွေ့သူ လေးဆယ်ကျော်ကို အသွားအလာ ကန့်သတ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ တစ်သန်းကျော်ပြီ၊ဂျပန်ရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ မြန်မာတစ်ဦးရဲ့အတွေ့အကြုံစတဲ့ဧပြီ ၃ရက်ထိပ်တန်းသတင်းများ